လူသားအားလုံးအတွက်: February 2011
Posted by မောင်စေတနာ at 12:27 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 1:46 AM 11 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
အွန်လိုင်းကနေချစ်သူတွေဖြစ်ပြီး ဘ၀ပါပေးချစ်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတွေအကြောင်းကို တင်ပြပြီးပါပြီ
အခုတခါမှာတော့ ပုဒ်မ၃၇၆လို့ ဆိုထားတာတဲ့အလိုမတူဘဲ ကာမရယူမှုပါ ပထမဆုံးပဒ်မ၃၇၆ အကြောင်းကို အရင်ရှင်းပြပါ့ မယ်။ (နားလည်သလောက်လေ့လာမိသလောက်ပေါ့ နော်.)။
ပုဒ်မ၃၇၆ ဟာမိန်းကလေးတစ်ဥိးရဲ့ အလိုဆန္ဒမပါပဲ. သားမယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းနေတာတာကို ဆိုလိုပါတယ်။မိန်းကလေးတော်တော်များများ မိမိမချစ်မနှစ်သက်တဲ့ သူကိုပေါင်းသင်းနေထိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ၊ အခုမှုခင်းတွေမှာဖတ်နေရတာဟာများသောအားဖြင့် ၃၇၆ မှုတွေပါ....။
ယောက်ျားတွေဟာ ဖွဲတစ်ဆုပ်ကိုကိုင်နိုင်တဲ့ခွန်အားရှိသရွေ့ ၃၇၆ မှုကိုကျူးလွန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအွန်လိုင်းမှာဖြစ်နေတာတွေတော်တော်များများမှာ ခန့်မှန်းမိသလောက်
ရယူလိုမှုမပါဘဲ အဖြူသက်သက်ချစ်တယ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ..အဲ့ဒီလို အွန်လိုင်းမှာ ချစ်တယ်လို့ ပြောပြီးအပြင်မှာတွေ့ ၊ကျူနေပြီးချစ်သူသက်တမ်း နှစ်လကနေ သုံးလအတွင်းမှာ living together ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ (အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲအချစ်စစ်နဲ့ချစ်နေတာတွေလဲ ရှိပါတယ်..တဖက်သက်မပြောပါဘူး.)အဲ့ လိုအတူနေပြီးမှ(လိုချင်တာရလို့ )ပြတ်သွားတာတွေထားခဲ့ တာကိုခံစားရတဲ့ မိန်းကလေးတွေဒုနဲ့ ဒေးရှိနေပါတယ်။
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့သိက္ခာကြောင့် ဖွင့်မပြောဘဲသာ နေရင်နေမှာပါ၊ သူ့ရဲ့အပျိုစင်ဘ၀ကတော့ ပျက်စီးသွားပါပြီ၊ အရင်ပို့ စ်မှာရေးခဲ့ သလိုပေါ့၊ နောက်ထပ်အဲ့ဒီ မိန်းကလေးဟာ ချစ်သူထပ်ထားလို့ လက်ထက်ရင်တောင် အိမ်ထောင်ရှင်ယောက်ျားရဲ့ ညိုညင်မှုကိုခံရနိုင်ပါတယ်။ ကဲ..ဒါဆို စဉ်းစား ရအောင်နော်.....။
ပုဒ်မ၃၇၆ဆိုတာအလိုမတူဘဲရယူမှု...........။ ဒါပေမယ့်အခုဖြစ်နေတာက အလိုတူရယူပြီးမှ ကျောရရုံ ကြံသွားတာ။ မိန်းကလေးတွေဟာ နှာခေါင်းပါပေလို့ မပါရင်အညစ်အကြေးကိုမုန့်လို့ ပြောကျွေးရင်တောင် စားမယ်လို့ ရှေးလူတွေပြောတာကြားဖူးပါတယ်၊ မိန်းကလေးတွေ အချစ်က ယောက်ျားလေးတွေထက် ရှစ်ဆပိုကြီးပါတယ်။ ပိုလည်းချစ်တတ်ပါတယ်၊ သူတို့ တကယ်ချစ်မိရင် သူတို့ အသက်တောင်မှပေးရဲတဲ့ သူတွေတွေ့ ဖူးပါတယ်။ သူတို့ချစ်တဲ့သူ လိမ်နေမှန်း သိရင်တောင်ယုံကြည်နေတာမိန်းမတွေရဲ့စိတ်ပါ။ အဲ့စိတ်ကလဲ အပြစ်တစ်ခုလို့ယူဆ လို့ရနိုင် ပါတယ်။ အဲ့လိုအတူနေပြီးမှ ပြတ်သွားတာကိုကျတော့ဘယ်ပုဒ်မနဲ့ တရားစွဲမလဲ...၃၇၆ လား ။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ သူအလိုတူလို့ အတူနေပြီး အခုမှ၃၇၆ ပုဒ်တပ်လို့မရတော့ပါဘူး. အွန်လိုင်းမှနေပြီး ကာမလိမ်လည်ရယူမှုတွေရှိနေလို့တရားစွဲနိုင်မဲ့ ပုဒ်မတစ်ခုတော့ လိုချင်မိတယ်..။
နှစ်ဥိးသဘောတူပေမဲ့ ကျောရရုံကြံသွားတဲ့ ယောက်ျားတွေအတွက် ဘယ်လိုအပြစ်က ထိုက်တန်မလဲ Death Note လို စာအုပ်ရှိလို့ကတော့ စုံစမ်းပြီးနာမည်တွေချရေးပစ်မှာ သေချာပါတယ်..အဲ့ လိုလူတွေရှိနေလို့ ယောက်ျားကောင်းတွေဟာ နာမည်ပျက်ပြီး အရှက်ရနေတာပါ ။ ညွှန်း တဖက်သက် မပြောပါဘူး။ တကယ်ချစ်လို့ တကယ်အပြင်မှာ လက်ထပ်သွားတာတွေရှိပါတယ် ။ နည်းလွန်းပါတယ်။
ဒိပို့စ်ရေးတာရိုင်းတာပါရင် တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒီပို့စ်ဟာအွန်လိုင်းကနေ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အရှက်နဲ့ သိက္ခာကို420လုပ်နေတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေ ဆင်ခြင်နိုင်အောင်ေ၇းပေးတာပါ၊ မိန်းကလေးတွေလည်းချစ်၇င်ဥိးနှောက်သုံးဖို့ ပါ၊အဲ့လိုလိမ်ညာရယူနေတဲ့ ယောက်ျားတွေဟာသူတို့ သာအဲ့ လိုမတရားလုပ်ရင်လုပ်မှာပါ၊ သူတို့ နှမ၊အစ်မတွေသာအဲ့ လိုဖြစ်ရင်တော့ တုတ်တွေဓားတွေနဲ့ သတ်မယ် ဖြတ်မယ်ဖြစ်ကြမှာပါ။ နှမချင်းမစာနာတာကို ပြောတာပါ အမျိုးထိတော့ သိလိုက်တာ၊ သူတို့ ကျတော့ ဒိကမတရားခံလိုက်ရတဲ့ မိန်းကလေးတွေကျတော့ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ...။
အပျော်တွဲတာကိုလက်ခံပါတယ်၊အပျော်အတူနေတာကိုတော့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးအနေ နဲ့အွန်လိုင်းမှာယောက်ျားအားလုံးကို မကောင်းဘူးမပြောပါဘူး ကောင်းတဲ့ သူတွေရှိပါတယ်၊သူတို့ တွေကို ချီးကျူပါတယ် လေးလဲလေးစားပါတယ်။ အဲမကောင်းတဲ့ သူတွေလဲရှိတာကိုတော့မမေ့ပါနဲ့။ အပျော်ကြံနေတဲ့အကျင့်လေးတွေကို ပြင်ပြီး သစ္စာရှိရှိချစ်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ပါတယ်..။
မှတ်ချက်။ ။တချို့မိန်းကလေးများကျတော့လဲ ယောက်ျားလေးက သစ္စာရှိတာတောင် ကိုယ့်သိက္ခာ ကိုယ်မနှမျောပဲ သစ္စာဖောက်သွားတာတွေရှိပါတယ်၊ အဲ့လိုမိန်းကလေးကိုတော့ စာရင်းထဲထည့့််နေစရာ မလိုတော့လို့ မရေးတော့ ပါဘူး။
Posted by မိုးယံ at 2:05 PM9comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 12:38 PM 14 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 3:21 PM9comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 11:36 PM3comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဒီ ကာတွန်းလေးတွေကို အီးမေးက ရပါတယ်။
သက္ကရာဇ် ၃၀၀၀မှာ ကြုံရမယ့် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေကို ကြိုတင်နိမိတ်ဖတ်ထားပါသတဲ့။
အိမ်သာတက်ရင်း ရေလွှာလျှောစီး :)
အိပ်ပျော်နေရင်း ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ် :)
ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး ပြောင်းနိုင်တဲ့ အ၀တ်အစား :)
လွယ်လွယ်လျှင်လျှင် အလှပြင် :)
“Stop”ဆိုရင် ရပ်ကိုရပ်ရမယ် :)
လောင်စာချွေတာဖို့ ဆပ်ကပ်ဆရာက ကျောင်းကြိုပို့ :)
ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီးတွေကြား ကားနဲ့သွား :)
ဟယ်လီကော်ပတာ ဦးထုပ် :)
ကျောပိုးအိပ်က ကျောပိုး :)
ခြေလေးချောင်း ဂျင်းဘောင်းဘီ :)
ပေါက်ကရလုပ်ရင် ဆုံးမတဲ့ ကွန်ပျူတာ :)
မျက်လှည့်လောက်စွမ်းတဲ့ အရိုးအထူးကု :)
Posted by မိုးယံ at 5:52 PM3comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 12:23 PM6comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 12:19 PM 8 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ နဲ့ ၁၃ ကို ကျော်ပြီး ၁၄ ကိုတွေးနေရင် .. မင်းကို မင်း
မြန်မာလို့ လူပုံအလယ်မှာ မပြောနဲ့ ... မင်းအစား ငါရှက်လို့ပါ ...
စန္ဒရားမတီးတတ်ဘူး သီချင်းကောင်းကောင်း နားမထောင်ခဲ့ရဘူး
ချစ်ရတဲ့နာစ့်မလေးကြည်ကို လူငှားနဲ့ ပိုးခဲ့ရသူ
လွတ်လပ်ရေးကိုစဉ်းစား ရင်း စစ်ဖိနပ်ပြောင်းပြန်စီးတဲ့သူ
လွတ်လပ်ရေးကိုစဉ်းစား ရင်း ဆံပင်ညှပ်မပြီးခင် ထထွက်သွားတဲ့သူ
အတူလမ်းဘေးမှာအကြော်စားတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်
သူ့ ကိုယ်သူ ပြည်သူတစ်ယောက်အဖြစ်ခံယူတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်
လူငယ်ဘ၀၊ လူ့ ဘ၀ရဲ့ စည်းစိမ်အရသာတွေ ခံစားဖို့ အချိန်မရခဲ့တဲ့သူ
သူ့ ဖြတ်သန်းမှုမှာ လွတ်လပ်ရေးဆိုတာတစ်ခု တည်းနဲ့
ဘ၀တွေက အဖုံဖုံ အသက်က ၃၀ မရှိတရှိ။
ငါတို့အောင်ဆန်းက နယ်နယ်ရရမဟုတ် -
ရိုးသားတဲ့မြန်မာတွေထက် ပိုရိုးသားတဲ့အောင်ဆန်း
သတ္တိပြောင်တဲ့ မြန်မာတွေထက် ပိုသတ္တိရှိတဲ့ အောင်ဆန်း
စွန့်လွှတ်ရဲတဲ့ မြန်မာတွေထက် ပိုစွန့်လွှတ်ပြတဲ့ အောင်ဆန်း၊
ပြည်သူ့ ဒီလှိုင်းလုံးကြီးတွေရဲ့ တ၀ုန်းဝုန်း ရိုက်ခတ်သံဟာ
အဲဒီအချိန်က ၀ိတိုရိယဘုရင်မကြီးကိုတောင်
အောင်ဆန်းရှေ့ ရောက်ရင် ရှမ်းတွေက ရှမ်းစကားမဆိုကြ
အောင်ဆန်းကို ယုံကြည်စွာနဲ့ သူတို့ သခင်အဖြစ် သိမှတ်ပြုကြ
ဒီပြည်လုံးကျွတ်အားကိုစုစည်းနိုင်ခဲ့လိုလည်း
တစ်စားပွဲထဲ ၀ိုင်းခဲ့ကြပေါ့ အကင်းပါးသူတွေပီပီ
မတိုက်မီက ရှုံးနေတဲ့ ဒီစစ်ကို ဒင်းတို့ မတိုက်ဝံ့ကြ
သူတို့ ရွေးခဲ့ကြ အောင်ဆန်းနဲ့အတွေ့မှာ။
ယုံကြည်အားကိုးတဲ့ မျက်လုံးပေါင်း သန်း ၆၀ အောင်ဆန်းမှာ ရှိတယ်
လွတ်လပ်ရေးကို တရှိုက်မက်မက်တောင့်တတဲ့ နှလုံးသားသန်း ၃၀ အောင်ဆန်းမှာရှိတယ်
အောင်ဆန်းသေဆို သေပြ၀ံ့တဲ့သူ အောင်ဆန်းမှာ တပြည်လုံးရှိတယ်
အခြောက်တိုက် ဘ၀င်မြင့်နေသူတွေ အားလုံး အရည်ပျော်သွားခဲ့ကြ။
အင်္ဂလိပ်ဆိုတာက ဝေလာဝေး သူငယ်နှပ်စားမဟုတ်။
လွတ်လပ်ရေးကို အမြန်ဆုံးလိုချင်နေတဲ့ 
မင်းတို့ ကနေ့ ရှူနေတဲ့ လေဟာ
ငါတို့ မနေ့က ချွေးစက်တွေဆိုတာ၊
မင်းတို့ မြန်မာဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကိုရဖို့
ငါတို့ ဘုံးဘောလအော ကျဆုံးပေးခဲ့ရတာ၊
ငါတို့ အလောင်းကောင်တွေဆင့်ြ ပီး ထမ်းတင်ပေးခဲ့တာ
မြန်မာလူမျိုးတိုင်းမှာ အဖေနှစ်ယောက်ရှိတယ်
ကျန်တစ်ယောက်က မြန်မာလူမျိုးကို မွေးပေးတဲ့အဖေ
မြန်မာလူမျိုးရဲ့ အဖေ မြန်မာ့အဖေ အောင်ဆန်းပေါ့။
အောင်ဆန်းက ကျုပ်အဖိုး ကျုပ်သားက အောင်ဆန်းရဲ့ မြစ်ပေါ့
သူ့ သားကျရင်လဲ သူ့ အဘေးနဲ့ ပေးတွေ့ နိုင်ဖို့
အခုကတည်းက အသေအချာ ကျုပ် မှာထားရအုံးမယ်။
Posted by မိုးယံ at 11:34 PM4comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
နေတတ်ရင် ကျေနပ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ လောကအလယ်မှာ
မနေတတ်လို့ ခဏခဏ မျက်မုန်းကျိုးခံရတဲ့ ကောင်ကို လိုက်ရှာတာ
မောလိုက်တာ... ချွေးဒီးဒီးကျပြီး မျက်နှာတွေအဆီပြန်လို့။
လားလား... မနေတတ်တဲ့ကောင် မတ်တပ်ကြီး။
ဇတ်ကားနံမည်က မေ့မရတဲ့ နေစွဲများဆိုလား
သဘာဝက ငိုချဖူးတဲ့နေ့တွေ ဓမ္မတာပဲ။
တစ် ပြီးမှ နှစ် လာရင် သဘာဝကျတာပဲလေ
ဘာမှ မလုပ်တာ ဘာမှမဖြစ်မဲ့သူတွေ လုပ်ရပ်
မိထွေးတော် ဂေါတမီလဲ မရှိတော့ပါဘူး
တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို မေ့ပြီး ကိုယ်နဲ့သူ့အတွက်ဆိုတာ
စည်းလုံးမှုရယ် ဖခင်ရယ်ကို မေ့ပြီး
တဏှာကို အသားပေးတာ ဘယ်လင်ကို သွားတိုင်းကြည့်မလို့လဲ
ဖြိုခွဲခံနေရတဲ့ လူတွေနဲ့ ဇီဝိန်ချုပ်သွားတဲ့သူတွေကို မမေ့နဲ့။
သူသာ မရှင်သန်ခဲ့ရင် ငါရော ရှင်သန်မှာလား
ဒေ၀ဒတ်လောင်းလို ကျောကိုတော့ ဖနောင့်နဲ့မပေါက်နဲ့။
Posted by မိုးယံ at 11:03 PM5comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 1:42 AM5comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Email Addressနှင့် Passwordများကိုပါ ခိုးယူသွားနိုင်သည့် Black Device ရရခြင်း နည်းပညာနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အရေးကြီးပြီးဆိုရင် ချက်ချင်းပြန်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်.တခါတလေကြတော့ ကူးပြီးပေး ရတာလဲ မကောင်းသလို..ကိုယ်ကိုတိုင်ဘဲသိသလိုလိုပြန်ပြီးရေးတာလဲ..မကောင်းဘူး.လေဆိုတော့..ရရခြင်း. ဒီလိုမျိုး အရေးကြီးတဲ့ နည်းပညာသတင်းကို ပြန်ဝေမျှလိုက်တာပါ.. ဖြစ်နိုင်တယ်. မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ ချင့်ချိန်ပြီး ဆုံးဖျတ်ပေးကြပါ..ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကိုယ့်အာဘော်လေး တွေနဲ့ကိုယ့်အကြိုက်လေးတွေ ရောတာတွေများမိတက်တဲ့ အခါမှာလဲ နားလည်ပြီး..လိုအပ်တာလေးတွေယူပြီး
Posted by မိုးယံ at 8:40 PM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မိုးယံ at 12:09 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ၏ မတော်တဆမှုနှင့် ပေါ့ဆမှုများကြောင့် ဇန်န၀ါရီလအတွင်း ခြောက်ဦးသေဆုံးကာ ၇၂ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ
ဇန်န၀ါရီလ နောက်ဆုံးပတ်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်မီးပွိုင့်
လမ်းဆုံ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ယာဉ်မတော်တဆမှုကို တွေ့ရစဉ်
ယခုနှစ် နှစ်စဖြစ်သော ဇန်န၀ါရီလတစ်လတာအတွင်း ခရီးသည်တင် ယာဉ်များကြောင့် ယာဉ်မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှု ၂၃ မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးခြောက်ဦး သေဆုံးခဲ့ကာ ၇၅ ဦးထိ ထိခိုက် ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြသည်ဟု ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းပေါင်းစုံ ထိန်းသိမ်းရေးကြီးကြပ်မှု ဗဟိုကော်မတီမှ သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းပေါင်းစုံ ထိန်းသိမ်းရေး ကြီးကြပ်မှု ဗဟိုကော်မတီစီမံမှုအောက်ရှိ ခရီးသည်တင်ယာဉ် လိုင်း ၁၈ လိုင်းတွင် ပြီးခဲ့သည့် ဇန် န၀ါရီလ တစ်လတာအတွင်း ယာဉ်မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင် အနောက်ပိုင်းခရိုင်ယာဉ်လိုင်းမှ ယာဉ်မတော်တဆမှု ရှစ်မှု၊ သေဆုံး သူ နှစ်ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၃၀ ဦး ဖြင့် အများဆုံးပေါ်ခဲ့သည်ဟု သိရ သည်။
မ.ထ.သ (မြို့တွင်း) ယာဉ် လိုင်းမှ ယာဉ်မတော်တဆမှု ၅ မှု၊ သေဆုံးသူ ၁ ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၆ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း သိရပြီး မြောက်ပိုင်းခရိုင် ယာဉ်လိုင်းမှ ယာဉ်မတော်တဆမှုလေးမှု၊ သေဆုံးသူမရှိခဲ့သော်လည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ ၂၁ ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သန်မြန်သူ ယာဉ်လိုင်းတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှု နှစ်မှု၊ သေဆုံးသူတစ်ဦးနှင့် ဒဏ်ရာ ရရှိသူ သုံးဦးရှိခဲ့ပြီး တောင်ပိုင်းခရိုင် ယာဉ်လိုင်းတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှု နှစ်မှု၊ သေဆုံးသူတစ်ဦးရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ယာဉ် လိုင်းတွင် မတော်တဆမှုတစ်မှုနှင့် သေဆုံးသူတစ်ဦးရှိခဲ့ပြီး မ.ထ.သ (အဝေးပြေး) ယာဉ်လိုင်းတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှုတစ်မှုနှင့် ထိခိုက်ဒဏ် ရာရရှိသူနှစ်ဦးရှိခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
ယာဉ်တိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာထက် ဘယ်သွားသွား၊ ဘယ်လာလာ၊ ဘာကားစီးစီး လုံခြုံစိတ်ချစွာ သွားလာနိုင်တဲ့ ကားတွေ၊ လမ်းတွေ၊ လူသွားစင်္ကြံတွေဖြစ်ဖို့ အရင်လိုအပ်ပါတယ်။ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ မမောင်းဘဲ မဆင်မခြင်ပြိုင်မောင်းတာကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူရမှာပါ . . .
"ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွေရဲ့ မတော်တဆမှုတွေ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ သေဆုံးမှုတွေ အမြဲလိုလို ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ယာဉ်တိုက်မှုတွေ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာထက် ဘယ်သွားသွား၊ ဘယ်လာလာ၊ ဘာ ကားစီးစီး လုံခြုံစိတ်ချစွာ သွားလာ နိုင်တဲ့ ကားတွေ၊ လမ်းတွေ၊ လူသွား စင်္ကြံတွေဖြစ်ဖို့ အရင်လိုအပ်ပါတယ်။ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ မမောင်းဘဲ မဆင်မခြင်ပြိုင်မောင်းတာကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူရမှာပါ။ တစ်ဖက် က တိကျစွာအရေးယူရမှာ ဖြစ်သလို၊ စည်းကမ်းတကျ မောင်းနှင်တတ်တဲ့ ယာဉ်လုပ်သားတွေကိုလည်း ထောက်ပံ့မှုတွေ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ်ပေါ့။ အပေးအယူ မျှသင့်ပါတယ်။
ယာဉ်လုပ်သားတွေ မှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ မိုးလင်းက မိုးချုပ် အလုပ်ချိန်များတာ၊ လူအများနဲ့ထိတွေ့ ဆက်ဆံရတာတွေ ရှိနေတဲ့အပြင် စာအုပ်စာပေ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်မှု အားနည်းတော့ ဘယ်လောက်ပဲ အသိပညာပေးပြီး ရေးသားပေမယ့် မဖတ်နိုင်ရင် အလကားပါပဲ။ ဒါကြောင့် တိုက်ရိုက်ရောက်နိုင်တဲ့ အသိပညာပေး ဖြန့်ဝေမှုတွေထိရောက်ဖို့ လိုပါတယ်" ဟု အငြိမ်းစား အစိုးရအရာရှိကြီးတစ်ဦးကပြောပြခဲ့သည်။
Posted by မောင်စေတနာ at 1:32 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဦးဇင်းဆီသို့ Forward မေးလ်တစ်ခုရောက်လာလို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ အောက်ဆုံးမှာမေးထားတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေပေးဖို့ စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ အဲဒီလို မိမိထင်ရာ ဖြေလိုက်ရင်လည်း တခြားသူတွေရဲ့ အမြင်ကို မရဘဲဖြစ်မှာဆိုးလို့ မိမိထင်မြင်ချက်ကို မရေးသေးဘဲ စာဖတ်သူပရိသတ်များရဲ့ ဗဟုသုတ၊ အကြံဉာဏ်ကိုလည်း လိုချင်သေးတာမို့ အရင်ဦးဆုံး မေးလ်ထဲရောက်လာတဲ့အတိုင်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သေချာဖတ်ပြီး ထင်မြင်ချက်လေးတွေ ပေးစေချင်ပါတယ်။ ပေးကြဖို့လည်း အနှုးအညွတ်တောင်းပန်းပါတယ်။ တကယ်လို့ ဆိုဒ်မှာ ထင်မြင်ချက်မပေးချင်ဘူးဆိုရင်လည်း ဦးဇင်းမေးလ် Sanninaymin@gmail.com မှာ မေးလ်ပို့လို့ ရပါတယ်။ ဒီထင်မြင်ချက်ပေးခြင်းသည် သင့်ရဲ့လူ့ဘ၀ရလာတဲ့ ဘ၀ခံယူချက် ဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မပေးရင်တော့ လူ့ဘ၀ရဲ့ခံယူချက် မရှိလို့ပဲ နေမှာပေါ့နော်။ Forward မေးလ်ထဲ ရောက်လာတဲ့ စာလေးကတော့ ဒီတိုင်းလေးပါပဲ။
ဦးတိဿလို့ဆိုရင် အဲသည်နယ်တစ်ဝိုက်မှာ မသိသူရှားပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆို တော့ ဦးတိဿက အဟောအပြောသိပ်ကောင်းတော့ အလှူပွဲအတန်းပွဲတိုင်းလိုလို သူချည်းတရားဟောနေရတာကိုး။ နောက်ပြီး ဦးတိဿက ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ မန္တလေးက နာမည်ကြီးစာသင်တိုက်ကြီးတစ်တိုက်မှာ စာချဆရာတော်လည်း လုပ်နေပါတယ်။
အဲဒီဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့အညီ ဦးတိဿကလည်း အနေအထိုင်မှန်တယ်။ စကားပြောနည်းတယ်။ ရိုးသားတယ်၊ ပွင့်လင်းမှုရှိတယ်၊ ရပ်ရွာကိစ္စမှန်သမျှကိုလည်း ရှေ့တန်းကနေတက်တက်ကြွကြွကူညီလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရပ်ရွာကလည်း ဦးတိဿကို ကြည်ညိုကြတယ်။ လေးစားကြတယ်၊ ချစ်ကြောက်ရိုသေကြတယ်။
အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုရှိလို့ ဦးတိဿရွာကိုပြန်ခဲ့ပြီဆိုရင် မှန်မှန်ကန်ကန်ရှိကြတဲ့ သူတွေက ဦးတိဿကို ခရီးဦးကြိုဆိုပြုကြတယ်။ မမှန်မကန်နဲ့သောက်သောက်စားစား မူးယစ်သမားတွေကတော့ ကြောက်လန့်ပြီး ပြေးကုန်ကြတယ်။ အဲဒီလောက်အထိ ဦးတိဿက အရှိန်အ၀ါကြီးမားလွန်းလှပါတယ်။
ဦးတိဿမှာ မွေးချင်းငါးယောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဦးတိဿက ဒုတိယမြောက် သားရတနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစ်ကိုအကြီးဆုံးနဲ့ ဦးတိဿအောက်နှစ်ယောက်က ကြင်ယာကိုယ်စီနဲ့တစ်အိုး တစ်အိမ်စီနဲ့ ဖြစ်နေကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အသက် အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မိသဲစုကတော့ အိမ်ထောင်မပြုသေးပဲ မိဘတွေနဲ့အတူနေပါတယ်။ ဦးတိဿမှာ အငယ်ဆုံးလည်းဖြစ် အိမ်ထောင်ကလည်းမပြုသေး၊ နောက်ပြီးမိဘတွေနဲ့ အတူနေတဲ့ မိသဲစုလေးကို ဂရုတစိုက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပညာရေးဘက်မှာဆိုရင်လည်း သူများထက်အောက်တန်းမကျရအောင် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတဲ့အထိ ဦးတိဿကပဲ ချီးမြှင့် ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်အနှံ့ မိဘတွေကိုဘုရားဖူးပို့ပြီဆိုရင်လည်း မိသဲစုက နောက်ကနေထပ်ကြပ်မကွာ ပါပြီးသားပါပဲ။
ဦးတိဿကလည်း မိသဲစုအပေါ် ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သလို မိသဲစုကလည်း အစ်ကိုဖြစ်တဲ့ ဦးတိဿအပေါ် ဂရုတစိုက် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဦးတိဿ မန္တလေးကနေ အကြောင်းကိစ္စနဲ့ရပ်ရွာကို ရောက်လာပြီဆိုရင်လည်း မိသဲစုကပဲ ဆွမ်းကွမ်းဝေယျာဝစ္စတွေကို တာဝန်ယူပြီး ချက်ပြုတ်ဆက်ကပ်ပေးပါ တယ်။ သင်္ကန်းဆိုရင်လည်း ဖွတ်လျှော်ပြီး မီးပူတိုက်ပေးရ၊ ဦးတိဿကြိုက်တတ်တဲ့ ဆွမ်းဘောဇဉ်ကိုလည်း မရိုးအောင် ချက်ပြုတ်ပေးလိုက်ရနဲ့ မိသဲစုမှာလည်း အစ်ကိုဦးဇင်းအတွက် မောတယ်ပန်းတယ်လို့ မရှိပါဘူး။ အဲဒီလို မောင်နှမနှစ်ယောက် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ကျေးဇူးတွေပြုပြီး ချစ်ချစ်ခင်ခင် ကြင်ကြင်နာနာ နေထိုင်ကြတာကိုပဲ ပတ်ဝန်းကျင်က ချီးကျူးဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်။ အားကျမက်မောနေကြတဲ့ သူတွေလည်းရှိကြလေရဲ့။
ဦးတိဿရဲ့ မွေးရပ်ဇာတိကလေးက မြို့နဲ့အလှမ်းမဝေးလေတော့ မြို့ပေါ်က ကုန်စိမ်းသည်တွေ၊ ကုန်ခြောက်သည်တွေ၊ နောက်အသားငါးသည်တွေဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လိုလို လာရောက် ရောင်းချနေကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း ရွာထဲကပဲတွေ၊ နှမ်းတွေ၊ စပါးတွေ၊ ကြက်ဘဲစတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို ၀ယ်ယူပြီး မြို့ပေါ်ကို ရောင်းချနေကြတဲ့ ကုန်သည်ယောင်ယောင်၊ ပွဲစားယောင်ယောင် တွေလည်း ရှိနေကြပါတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ မြို့ပေါ်က အမဲသားတွေကို ရွာထဲကိုလာရောင်း၊ ရွာထဲက သားသတ်နွားတွေကို မြို့ပေါ်မှာတက်ရောင်းနေတဲ့ ယာကွတ်ဆိုတဲ့ လူလည်းပါပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ဧည့်သည်လာရင် ၀မ်းသာကြသလို ဧည့်သည်ပြန်ရင် လည်း လွမ်းတတ်ကြတဲ့အလေ့အထဟာ အခုချိန်ထိ အရိုးစွဲနေကြတုန်းပါပဲ။ နောက်ပြီး ရိုးသားဖြူစင်လှတဲ့ တောသူတောင်သားတွေဟာ ဧည့်သည်ဆိုရင် လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ မရှိရှိရာကရှာကြံပြီး ဧည့်ခံတတ်ကြပါတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ ဦးတိဿရဲ့ ခမည်းတော်ဦးလွန်းကြွယ်နဲ့မယ်တော်ဒေါ်ခင်မိုးတို့လည်း ပါပါတယ်။ ဦးလွန်းကြွယ်+ဒေါ်ခင်မိုးတို့ဟာ မြို့ပေါ်က အမဲအသားအရောင်းအ၀ယ် လုပ်နေတဲ့ ယာကွတ်ဆိုတဲ့ လူနဲ့လည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေကြပါတယ်။ သူတို့မြို့ကို သွားရင်လည်း ယာကွတ်ကကျေပြွန်အောင် ဧည့်ခံတတ်ကြသလို ကိုယ့်ဆီလာရင်လည်း ဧည့်ဝတ်မပျက်စေရပါဘူး။
ယာကွတ်ကလည်းဦးလွန်းကြွယ်ကြိုက်တတ်တဲ့ အမဲခြောက်၊ အမဲအူ၊ အမဲသဲစတဲ့ ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ အသားတွေကို ပို့ပေးသလို ဦးလွန်းကြွယ်+ဒေါ်ခင်မိုးတို့ကလည်း သူတို့ ယာကထွက်တဲ့ သစ်သီးဝလံတွေကို လူကြုံနဲ့တစ်လှည့်၊ သမီးနဲ့တစ်ဖုံ ပို့ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ပညာတတ်ဘွဲ့ရလည်းဖြစ်၊ တစ်ရွာလုံးမှာ အချောဆုံးအလှဆုံးလည်းဖြစ်၊ နောက်ပြီး ဦးတိဿရဲ့အရှိန်အ၀ါကြောင့် ဘယ်လူပျိုကာလသားကမှ မော်မကြည့်ရဲတဲ့ မိသဲစုလေးဟာ သားသတ်နွားသတ်တဲ့ ယာကွတ်နဲ့အတော်ပင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေကြပါတယ်။ ဦးလွန်းကြွယ်+ဒေါ်ခင်မိုးတို့က လည်း အမဲသားမျက်နှာကြောင့် ယာကွတ်နဲ့သမီးတို့ရဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ပါ တယ်။
ကျားဆိုတဲ့သတ္တ၀ါဟာ သားကောင်ကိုတွေ့တဲ့အခါ သနားတယ်ဆိုတာ မရှိသလို သူ့ရဲ့စက်ကွင်းထဲကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်း အလွတ်ပေးတယ်ဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဦးတိဿရဲ့ အသည်းနှလုံးတွေနဲ့ စုပုံပြီး ချစ်ခဲ့ရတဲ့ မိသဲစုဆိုတဲ့ ယုန်သူငယ်မလေးဟာ သားသတ်ယာကွတ်ဆိုတဲ့ ကျားရှေ့မှာ မှောက်လျက်လဲသလိုမျိုး ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာ စာချဘုန်းကြီးအဖြစ် သတင်းလည်းကြီး၊ တရားဟောဘက်မှာလည်း ထူးချွန်လှတဲ့ ဦးတိဿခမျာ ဘယ်လိုမှမသိရှာခဲ့ပါဘူး။ ဦးလွန်းကြွယ်+ဒေါ်ခင်မိုးတို့ရဲ့ ပြုမူပုံတွေကို ရပ်ထဲရွာထဲက မျက်စိစပါးမွှေးစူးနေကြတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကလည်း မျက်နှာတောင် ကောင်းကောင်း မော်မဖူးရဲကြတဲ့ ဦးတိဿကြီးကို ဘယ်သူမှလည်း မလျှောက်ရဲကြသလို လျှောက်ဖို့ရာမှာလည်း အခွင့်မကြုံခဲ့ကြပါဘူး။
ဦးလွန်းကြွယ်နဲ့ဒေါ်ခင်မိုးတို့ကလည်း သားသတ်သမားယာကွတ်နဲ့ သမီးဖြစ်သူ မိသဲစုတို့ရဲ့ အခြေအနေကို တကယ်ပဲမသိရော့လေသလား၊ ဒါမှမဟုတ် အမဲသား မျက်နှာကြောင့် သိသိကြီးနဲ့ လွှတ်ပေးထားသလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အမုန်းခံရမယ့်အခြေအနေဆိုတော့ ဘယ်သူမ မမေးမြန်းကြပါဘူး။ ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးတွေကြောင့် ယာကွတ်နဲ့မိသဲစုတို့ရဲ့သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုးဟာ ပိုလို့ပင် ချည်မိလျက်သား ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
တစ်နေ့မှာ ဦးလွန်းကြွယ်နဲ့ဒေါ်ခင်မိုးတို့ဟာ သူ့ရဲ့သမီးချောချောလှလှလေး မိသဲစုကို သားသတ်သမားထံ ပေါ်ဦးပေါ်ဖျားဖြစ်တဲ့ ပဲဆီနှင့်ခြံကထွက်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ လက်ဆောင်ပေးဖို့ရန် မြို့ကိုတစ်ယောက်တည်း လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ သမီးဖြစ်သူဟာ မြို့ကို တစ်ခေါက်ခေါက်သွားရင် အနည်းဆုံး နှစ်ညအိပ် သုံးညအိပ် ကြာတတ်ပါတယ်။
အခုလည်းပဲ မိသဲစုသွားတာဟာ နှစ်ညအိပ်သုံးရက်ရှိပြီမို့ သမီးပြန်လာမယ့် လာလမ်းကိုသာ မှန်းမျှော်လို့ စောင့်ကြိုနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမီးကတော့ ပြန်မလာပါဘူး။ သူ့ရဲ့ကိုယ်စား “ ဖေဖေနဲ့မေမေ သမီး ယာကွတ်နဲ့လက်ထပ်လိုက်ပါပြီ။ သမီးကိုခွင့်လွှတ်ပါ“ဆိုတဲ့ လူကြုံနဲ့ပို့လိုက်တဲ့ စာလွှာလေးပဲ ပြန်လာပါတော့တယ်။
ဒီအကြောင်းကို ကြားသိသွားတဲ့ ဦးတိဿလည်း မန္တလေးကနေရွာကို ကပျာကယာနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ရွာပြန်ရောက်တော့အသည်းပုံပြီးချစ်ခဲ့ရတဲ့ ညီမရဲ့ကယောက်ျားက လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အသံလည်းကြားရော ယမ်းပုံမီးကျသလို အပြင်းအထန်ပေါက်ကွဲတော့တာပါပဲ။ ပိုပြီးဆိုးတာက မိသဲစုလေးရဲ့ ယောက်ျားက လူပျိုလူလွတ်မဟုတ်ဘဲ သားသမီးငါးယောက်အဖေ ဖြစ်နေပါသတဲ့။
ဒါပေမယ့် မိသဲစုခမျာ လှပတဲ့အပျိုရည် နဂိုလို ပြန်မဖြစ်လာတာကတစ်ကြောင်း "ပေါက်တဲ့နဖူး မထူးဘူး“ဆိုပြီး ဖြစ်ရတာကတစ်ကြောင်း၊ နောက်ပြီး မိဘည်ီကိုမောင်နှမ ကြားမှာ မျက်နှာမလှ အရှက်ရတာကတစ်ကြောင်းဆိုတော့ အဲဒီလူမျိုးခြား ဘာသာခြားရဲ့မယားငယ်အဖြစ်နဲ့ပဲ စုံးစုံးမြှုပ်သွားရပါတယ်။ အခုဆိုရင် မိသဲစုမှာ သားသမီးတွေတောင်ရနေပါပြီ။ သားသမီးတွေအားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ကြသလို မိသဲစုကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘာသာပြောင်းပေးလိုက်ရတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတယ်။
နောက်ပိုင်းကြားသိရတာက မိမိကို ပညာလည်းသင်ပေး၊ အစ်ကိုအရင်းလည်း ဖြစ်တဲ့ ဦးတိဿကြီးကိုတောင် ရှိခိုးဦးချခိုင်းလို့ မရတော့ပါဘူးတဲ့။ ဒီအကြောင်းလေးဟာ “ပြောမယုံ ကြုံမှသိ“ ဆိုတာမျိုးလို မကြုံဖူးပဲနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ ယုံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအကြောင်းဟာလည်း လုပ်ကြံပြီးရေးထားတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အထက်အညာရွာတစ်ရွာမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုတာ စည်းကမ်းမရှိတဲ့ မိသဲစုကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား။ ဒါမှမဟုတ် အမျိုးသားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သွန်သင်ဆုံးမမှု ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့ ဦးတိဿကြီးကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား ။ နောက်ပြီး သားသမီးကို ဆိုဆုံးမမှုမပြုပဲ လမ်းမှားရောက်အောင် ပို့ပေးတဲ့ မိဘတွေဖြစ်တဲ့ ဦးလွန်းကြွယ်နဲ့ဒေါ်ခင်မိုးတို့ကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိက ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှေ့တန်းကနေ ဦးဆောင်ဦးရွက် ရှိနေပေမယ့် အမျိုးသားရေးဘက်မှာတော့ တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှ သွန်သင်ဆုံးမမှုမရှိခဲ့တဲ့အတွက် အခုလို "အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက် "သလိုမျိုး ဖြစ်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ငါ့ညီမ၊ ငါ့ဆွေမျိုး၊ ငါ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ ဒီလိုလူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားနဲ့ဘယ်တော့မှ မညားလောက်ပါဘူးဆိုပြီး အန္တရာယ်ကို အထင်သေးခဲ့တာတွေလည်း ပါပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရဟန်းတော်များအနေနဲ့ “အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်“သလိုမျိုး မဖြစ်ရအောင် ကိုယ်နဲ့နီးစပ်ရာ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အမျိုးသားရေးသတိ၊ ဘာသာရေးအသိအမြင်တွေ ပြန့်ပွားအောင် နိုးနိုးကြားကြားလေးတော့ ရှိနေစေချင်ပါတယ်။
သျှမ်းသျှမ်းတောက်အောင်မြင်နေတဲ့ ဒါရိုက်တာကြီးက လမ်းဘေးမှာ ဘ၀ကစုတ်ပြတ်နေတဲ့ ဘာသာခြား ကောင်မလေးကို ကယ်တင်ပေးရင်း သံယောဇဉ်တွေ တွယ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာ လူရာသွင်းဖို့ အတွက် လက်ထပ်ဖို့ ကောင်မလေးကိုပြောတော့ ဘာသာခြားကောင်မလေးက သူ့ဘာသာထဲမ၀င်နိုင်ရင် ရှင့်ကို လက်မခံဘူးတဲ့။ ကျွန်တော် မြင်နေတာကတော့ မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်တွေဟာ အခြားသော ဘာသာဝင်တွေလောက် ခံယူချက်မပြင်းထန်ကြပါဘူး။ ငွေကြေးနဲ့ အောင်မြင်မှု အနည်းငယ်လောက်အတွက် သံသရာနဲ့ ရင်းရဲကြတာကိုလည်း အံ့သြမဆုံး ဖြစ်မိပါတယ်။အချို့ကျတော့လဲ အသက်နဲ့ရင်းပြီးကို ခံယူချက်ပြင်းထန်တာကို ကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးပါရဲ့ ။ လူဦးရေ သန်းငါးဆယ်ကျော်နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင်တော့ (မတန်မရာ လိုက်တုပြီး နမူနာပေးရရင်) မြတ်စွာဘုရားရှင် ရဲ့ လက်သဲခွံပေါ်က မြေမှုန့်လေးတွေနဲ့ မဟာပထ၀ီ မြေကြီးနဲ့ ကွာသလောက် ဖြစ်နေတာကို ရင်နာမဆုံးလို့။
Posted by မိုးယံ at 11:29 PM4comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by မောင်စေတနာ at 8:44 PM5comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest